(१) विभिन्न शैली र उचित कारखाना मूल्य।
(२) २ quality घण्टा भित्र उच्च गुण र द्रुत प्रतिक्रिया।
()) भन्दा बढी १ years बर्षको अनुभव निर्माण गर्दछ।
हाम्रा मूल्यहरू आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरूको आधारमा परिवर्तनको अधीनमा छन्। थप जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गरेपछि हामी तपाईंलाई अपडेट गरिएको मूल्य सूची पठाउनेछौं। वा हामीलाई मनपर्ने उत्पादनहरूको मोडेल बताउनुहोस्, त्यसपछि हामी उद्धरण पठाउनेछौं।
D.Do तपाईंसँग न्यूनतम अर्डर मात्रा छ? के म रंगहरू मिक्स गर्न सक्छु?
हो, हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू आवश्यक छ चल न्यूनतम अर्डर मात्रा। यदि तपाईं पुन: बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर धेरै थोरै परिमाणमा भने हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्नुहोस्।
रंग र शैलीहरू मिक्स गर्नुहोस् हाम्रो लागि ठीक छ।
तपाइँको नमूना वा उत्पादन नेतृत्व समय कति हो?
नमूना: --7 दिन पछि सबै कुरा पुष्टि भयो।
मास उत्पादन: -30--30० दिन, डिजाइनमा निर्भर गर्दछ।
नेतृत्व समय प्रभावी हुन्छ जब (१) हामीले तपाईंको निक्षेप प्राप्त गर्‍यौं, र (२) हामीसँग तपाईंको उत्पादनहरूको लागि अन्तिम स्वीकृति छ। यदि हाम्रो नेतृत्व समय तपाईंको डेडलाइनको साथ काम गर्दैन भने, कृपया तपाईंको बिक्रीको साथ तपाईंको आवश्यकताहरू माथि जानुहोस्। सबै केसहरूमा हामी तपाईंको आवश्यकताहरू समायोजन गर्न प्रयास गर्नेछौं। धेरै जसो केसहरूमा हामी त्यसो गर्न सक्षम हुन्छौं।
गुण नियन्त्रणको बारेमा के हुन्छ?
सबै उत्पादनहरू एकदम कडाईका साथ निरीक्षण गरिनेछ र हामी शिपमेंट अघि अनुमोदनका लागि पठाउनको कुनै पनि उत्पादनहरू लिन्छौं। तपाईले अनुमोदन गर्नुभयो र पठाउनको लागि अनुमति दिइसकेपछि हामी सामानहरू मुक्त गर्छौं।
हो हामी प्राय जसो विश्लेषण / कन्फरेन्समेन्ट, बीमा, उत्पत्ति, र अन्य निर्यात कागजातहरूको प्रमाणपत्र सहित कागजात प्रदान गर्न सक्छौं।
के हामी तपाईंको कारखानाको भ्रमण गर्न सक्छौं?
हामी तपाईंलाई न्यानो स्वागत छ हाम्रो कारखाना कुनै पनी भ्रमण गर्न।
तपाईं हाम्रो बैंक खातामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ: %०% जम्मा अग्रिम, B०% ब्यालेन्स B / L को प्रतिलिपिमा।
हामी हाम्रो सामग्री र कारीगरी ग्यारेन्टी गर्दछौं। हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो उत्पादन संग तपाईंको सन्तुष्टि को लागी हो। वारेन्टीमा वा नहोस्, सबैको सन्तुष्टिका लागि सबै ग्राहकका मुद्दाहरूको समाधान र समाधान गर्नु हाम्रो कम्पनीको संस्कृति हो।
(१) यदि तपाईं सानो अर्डर सिधा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं अलिबाबामा हाम्रो ई-शप जान सक्नुहुनेछ। https://znsfashion.en.alibaba.com/
(२) हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् वा थोक अर्डरको लागि हामीसँग सन्देश सम्पर्क छोड्नुहोस् स्वागत छ।